အမြဲတမ်း Verb အများလိုက်ရမှာဒါတွေပါ
1 Apr 2018 . 12:08 PM
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖြစ်အောင်တစ်ပတ်မှာတစ်ကြိမ် အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးရာမှာ အရင်တစ်ပတ်က အမြဲတမ်း Singular Verb လိုက်ရမယ့် Subject တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဘယ် Subject Noun တွေနောက်မှာ Plural Verb အမြဲလိုက်ရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
Staff,Personnel,Police တွေဆိုတာက လူအများကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ နာမ်တွေပါ။ ဒီလိုနာမ်တွေရဲ့နောက်မှာ အမြဲတမ်းကြိယာအများလိုက်ပါတယ်။
ဥပမာ- The staff are atameetng.
The army personnel number seven hundred.
၂)A number of
အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာက A number of ဆိုပြီးaသုံးပေမယ့် အမြဲတမ်းအများဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ A number of ဟာ Several ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – A number of students do not have files.
the poor,the rich, the educated,the sick, the intelligent လိုမျိုးတွေပါ။ ဒါတွေဟာ လူချမ်းသာများ၊ ဆင်းရဲသားများ၊ ပညာတတ်များ၊ နာမကျန်းဖြစ်သူများ၊ ဥာဏ်ကောင်းသူများ စသဖြင့်အများကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိယာအများလိုက်ရပါမယ်။
ဥပမာ – The poor have no housing.
The educated have no problem with jobs.
တချို့သော နာမ်တွေက ကြိယာအနည်းလိုက်မလား အများလိုက်မလားဆိုတာက Depending on the context ပါ။ အကြောင်းအရာ အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာထူးခြားတာ ၂ ခုရှိပါတယ်။
1) Emphasis on group as one unit.
board, committee,company,management , team, family,government, jury,audience စတာတွေပါ။
ဥပမာ- My family enjoys watching television.
The jury has returnedaverdict of ‘Not gulity’. ဒီလို စိတ်တူကိုယ်တူ အစုတစ်ခုတည်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာ ကြိယာအနည်းလိုက်ပြီးတော့…
2) Emphasis on the individuals within the groups.
အဖွဲ့ထဲမှာတင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီတဲ့အခါမျိုး သဘောထားကွဲနေတာမျိုးတွေမှာ ကြိယာအများလိုက်ရပါမယ်။
ဥပမာ- My family have different tastes in food.
The jury are not in agreement over the verdict. ဆိုတာမျိုးပါ။
တချို့သောနာမ်တွေဟာ ကြိယာအနည်းအများလိုက်မလားဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ်ပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ Depending on the meaing ပါ။
1)ဥပမာ- Sound travels faster than the jets.
The thought of the test terrifies him.
Your experience qualifies you.
ဒီလို ကြိယာအနည်းနဲ့ သုံးသလို ဒီလိုကျရင်တော့ အများလိုက်ပါတယ်။
2)ဥပမာ- Sounds of laughter fill the air.
Happy thoughts come to her mind.
His experiences in Spain were exciting.
His crimes are serious. စသဖြင့် ကြိယာအများသုံးပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အားလုံးခွဲခြားမှတ်သားကြဖို့လိုပါတယ်။ မရှင်းတာလေးတွေရှိရင်လည်း ကွန်းမန့်မှာမေးခဲ့နိုင်ပါတယ်နော်။
အမွဲတမျး Verb အမြားလိုကျရမှာဒါတှပေါ
အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာဖွဈအောငျတဈပတျမှာတဈကွိမျ အင်ျဂလိပျသငျခနျးစာလေးတှကေိုဖျောပွပေးရာမှာ အရငျတဈပတျက အမွဲတမျး Singular Verb လိုကျရမယျ့ Subject တှအေကွောငျးကိုဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ဒီတဈပတျမှာတော့ ဘယျ Subject Noun တှနေောကျမှာ Plural Verb အမွဲလိုကျရမလဲဆိုတာ ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
Staff,Personnel,Police တှဆေိုတာက လူအမြားကိုကိုယျစားပွုတဲ့ နာမျတှပေါ။ ဒီလိုနာမျတှရေဲ့နောကျမှာ အမွဲတမျးကွိယာအမြားလိုကျပါတယျ။
အမွဲတမျးမှတျထားရမှာက A number of ဆိုပွီးaသုံးပမေယျ့ အမွဲတမျးအမြားဖွဈတယျဆိုတာပါပဲ။ A number of ဟာ Several ဖွဈပါတယျ။
the poor,the rich, the educated,the sick, the intelligent လိုမြိုးတှပေါ။ ဒါတှဟော လူခမျြးသာမြား၊ ဆငျးရဲသားမြား၊ ပညာတတျမြား၊ နာမကနျြးဖွဈသူမြား၊ ဉာဏျကောငျးသူမြား စသဖွငျ့အမြားကိုရညျညှနျးတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကွိယာအမြားလိုကျရပါမယျ။
တခြို့သော နာမျတှကေ ကွိယာအနညျးလိုကျမလား အမြားလိုကျမလားဆိုတာက Depending on the context ပါ။ အကွောငျးအရာ အခွအေနပေျေါလိုကျပွီး ဆုံးဖွတျပါတယျ။ ဒီနရောမှာထူးခွားတာ ၂ ခုရှိပါတယျ။
board, committee,company,management , team, family,government, jury,audience စတာတှပေါ။
The jury has returnedaverdict of ‘Not gulity’. ဒီလို စိတျတူကိုယျတူ အစုတဈခုတညျးလို့ဆိုနိုငျတဲ့အကွောငျးအရာတှမှော ကွိယာအနညျးလိုကျပွီးတော့…
အဖှဲ့ထဲမှာတငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူညီတဲ့အခါမြိုး သဘောထားကှဲနတောမြိုးတှမှော ကွိယာအမြားလိုကျရပါမယျ။
The jury are not in agreement over the verdict. ဆိုတာမြိုးပါ။
တခြို့သောနာမျတှဟော ကွိယာအနညျးအမြားလိုကျမလားဆိုတာကို အဓိပ်ပါယျပျေါမူတညျဆုံးဖွတျပါတယျ။ Depending on the meaing ပါ။
ဒီလို ကွိယာအနညျးနဲ့ သုံးသလို ဒီလိုကရြငျတော့ အမြားလိုကျပါတယျ။
His crimes are serious. စသဖွငျ့ ကွိယာအမြားသုံးပွနျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အားလုံးခှဲခွားမှတျသားကွဖို့လိုပါတယျ။ မရှငျးတာလေးတှရှေိရငျလညျး ကှနျးမနျ့မှာမေးခဲ့နိုငျပါတယျနျော။